अफ्रिका संयोजक रोशन थापाले दिए एनआरएनए महासचिव शर्माको १३ प्रश्नको यस्तो जवाफ
१४ भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. हेमराज शर्माका १३ प्रश्नका जवाफ अफ्रिकाको जाम्बियामा रहेका एनआरएनए अफ्रिका संयोजक रोशन थापाले दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अगाडि उभिएका प्रश्न र अग्रगामी ऐजेण्डाका विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने भन्दै शनिबार महासचिव डा. शर्माले सामाजिक संजाल फेसबुकमा उठाएका १३ वटै प्रश्नको जवाफ अफ्रिका संयोजक थापाले दिएका हुन् ।
यस्ता छन् थापाले दिएका १३ प्रश्नको जवाफ
महासचिबज्यूको अगाडी उभिएका प्रश्नमा मेरो धारण राखेकोछु ।
प्रश्न नं १-स्थापना भएको १७ वर्षसम्म पनि किन एनआरएनए आम गैरआवासीय नेपाली बिच पुग्न सकेको छैन ? ६० लाख नेपाली बाहिर छन् भन्ने मान्ने हो भने जम्मा १.२५ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरु मात्र संघका पञ्जिकृत सदस्य छन् । यी मघ्ये कतिजना स्वस्फूर्त सदस्य बनेका छन् ? सदस्य बनाउन उम्मेदवारहरुको पकेट कति रित्तिन्छ ? एकेडेमिक क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीहरुले किन एनआरएनबाट किन टाढा छन ? खाडीका नेपालीले किन एनआरएन भएको महसुस गर्दैन ?
उत्तरः सीमित श्रोत र साधनका बावजूद आज ८३ देशमा हाम्रो संस्था बिस्तार हुन पुगेको छ । अझै फैलिने क्रम चलिरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ । हाम्रो बिधानको परिच्छेद–४ को ७.१ अनुसार सबै ६० लाख हाम्रो साधाण सदस्य हुन्, परिच्छेद–४ को ७.२ अनुसार पञ्जिकृत सदस्य जो क्रियाशील रूपमा सघका हरेक गतिबिधिमा सक्रिय छन् । जो आगामी दिनमा हाम्रो सत्कर्मले बढ्दै जानेकुरामा दुई मत नहोला । स्वस्फूर्त सदस्य बन्ने कुरा ब्यक्तिगत चाहना र स्वतन्त्रताका कुरा हुन् भने सदस्य बनाउन उम्मेदवारहरुको पकेट कति रित्तिन्छ भन्ने कुरा सम्बधित ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वार्थको कुरा हुन् जो किन भई राखेको छ हामी सबैलाई अवगत नै छ । यही बिधान भित्रैबाट जुन समस्यको निराकरण सम्भब छ । एकेडेमिक क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीहरु किन टाढा छन् न भन्ने कुरा बिधानको परिच्छेद–३ अनुसार यो गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाको यहा जो कोहीलाई पनि हामी भित्रि मनबाट स्वागत गर्न सधै आतुर छौं ।
गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुने वा नहुने कुरा ब्यक्तिगत इच्छाका बिषय हो जस्तो ला । एकेडेमिक क्षेत्रका ब्यक्तिको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई महसूस गरेर नै यहाँलाई पनि हामीले अघिल्लो चुनाबमा बिजयी गराएको कुरा घाम जस्तै छर्लंगै छ ।
प्रश्न नं २-संघमा दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता किन शून्य छ ?
उत्तरः महिला र युवाको सहभागिता किन नगन्य छ ? मेरो धारणाः दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्ने अभियान एसिया प्यासिफिकको साथीहरूको अगुवाईमा सुरु भई सकेको कुरा यहालाई अवगत न । महिला र युवाको सहभागिता समानुपातिक हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यति निराशजनक छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रश्न नं ३-एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्न किन व्यवसायी हुनुपर्र्छ, एकेडेमिक वा पेशागत व्यक्ती किन पुग्न सक्दैनन् ?
उत्तर- गैर नाफा मूलक सामाजिक संस्थामा आब्द्ध भएर नेतृत्वमा पुग्नका लागि समय र श्रोत आफैले जुटाउनु पर्छ । ब्यक्तिगत लाभ नपाइने तथा ब्यक्तिगत समयको अभाब पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ । चर्को उमेद्वारी शुल्कलाई हटाउने हो भने यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रश्न नं ४- संघमा राजनीति र पैसा किन हावी छ ? निर्वाचनमा किन राजनीतिक दलका नेताहरुले हायात होटलमा अड्डा जमाउन् ? केन्द्रिय निर्वाचनमा कतिको पकेट भरिन्छ ? एनआरएनमा दशौं वर्ष योगदान गरेर उम्मेदरबार बनेका (कुनै दलको चौवन्नी सदस्य नलिएका) कुमार पन्त र कुल आचार्यलाई यो वा त्यो दलको बिल्ला भिराएर हराउने वा जिताउने खेल किन खेलिन्छ ?
उत्तरः हामी नेपालीहरू जहा पुग्छौ त्यहा राजनीति पनि संगै लिएर गएका हुन्छौ । जहिलेसम्म हामी संघको उद्धेश्यहरूलाई केन्द्र बिन्दुमा नराखेर ब्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडी राख्छौ यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन् । जब बिचार र भिजनले चुनाब जित्न नसकिने भयो भन्ने लाग्छ अनी पैसा र पावरको दुरुपयोग हुने हो ।
प्रश्न नं ५- नेपाल सरकारलाई सभ्यताको पाठ सिकाउने हामीलाई हायत होटलमा किन लाठी बर्साउनु पर्छ ?
उत्तरः यो कुरा बिगतको नेतृत्वको ब्यवस्थापकिय कमजोरी हो ।
प्रश्न नं ६-सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एनआरएन विश्व सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनुपर्ने स्थिति किन आउछ ?
उत्तरः हाम्रो असक्षम निर्बाचन कमिटीको गल्तीले गर्दा भएको हो यसको दोष अरुलाई लगाऊनु भनेको २-३ दिन सम्म पनि घाम र पानीको प्रवाह नगरी मतदान गर्न बसेकासाथीहरू प्रति घोर अन्याय हुनेछ ।
प्रश्न नं ७-राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लास उठाउने देखि गैरआवासीय नेपालीहरुको शुख दुःखमा साथ दिने पदाधिकारीहरु (नेपाल जान नसकै कारणले) किन केन्द्रीय चुनावमा भाग लिनबाट बञ्चित हुन्छन् ?
उत्तर-नेपालीहरुको शुख दुखमा साथ दिने पदाधिकारीहरुलाई हृदय देखीनै नमन गर्दै सबैलाई उपयुक्त हुने दिन र समय एकै दिन नपर्न पनि सक्छ । चुनाबमा भाग लिन नपाएकै कारणले हामीले गर्ने सामाजिक कार्यलाई बाधा पुर्याउछ जस्तो लाग्दैन ।
प्रश्न नं ८-प्रविधीको जमानामा बोरामा सदस्यता फाराम उठाएर ग्यारेजमा थन्काउने परिस्थिति किन बन्छ ? काठमाडौंमा मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न र मतदान गर्न किन घण्टौं लाईनमा बस्नु पर्छ ?
उत्तरः नेतृत्वको ब्यबस्थापकिय कमजोरीका कुराहरू हुन् । प्रविधीको उच्चतम प्रयोगबाट बिगतका कमजोरीलाई हटाऊन सकिन्छ ।
प्रश्न नं ९- खाडीमा प्रत्येक दिन दुई नेपालीको मृत्यु हुँदा हामी किन मुकदर्शक छौं ? स्वदेश फर्केका नेपालीहरुको सिप किन सदुपयोग हुन सकेको छैन ? खाडीका कामदारले बचाएको थोरै पैसा लगानी गर्ने वातावरण किन बन्न सकेको छैन ?
उत्तरः यस्ता साजाजिक कार्य हाम्रो खाडीमा रहेका संघंका साथीहरू सीमित श्रोतका बीच दिन र रात नभनि खटीरहनु भएका साथीहरू प्रतिको अन्याय हो । र प्रश्न न ९ र १० को काम गर्नलाई अहिलेको बिधान र नियमावलीले कही पनि अवरोध गरेको छ जस्तो लाग्दैन । यदि भए छलफल गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न नं ११- नेपालमा भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता दैंवी प्रकोपमा सहयोगका लागि संघका पदाधिकारीको पकेटमा मात्र किन भरपर्नु परेको छ ?
उत्तरः यहाँलाई स्मरण रहोस, नेपाललाई सारो गाह्रो पर्दा हाम्रा साथीले मुठी खोलेर सहयोग गर्नु भएको यथार्थलाई छाँयामा पारेर सबै संघका पदाधिकारीको पकेट बाट मात्र भयो भन्नु दिउसै रात पार्नु हो ।
प्रश्न नं १२- ग्लोवल वार्मिङ्ले नेपाललाई पारेको समस्या, सिमा विवादलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न सक्दैनौ ?
उत्तरः मलाई जहासम्म लाग्छ गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाको उदेश्य बाहिरको कुरा हुन् । यदि गर्ने नै भए हाम्रो बिधानको परिच्छेद–३ लाई संशोधन गरौ ।
प्रश्न नं १३-डा. उपेन्द्र महतोले देख्नु भएको संमृद्ध नेपाल बनाउने सपना र डा. शेष घलेले ग्लष्तभम ल्बतष्यल या ल्भउबभिकभ बनाउने सपना साकार बनाउन सकौला ? राजनीति र पैसाबाट एनआरएनए खुला रुपमा बलत्कृत हुँदा ‘द्रोपतीको चिरहरणमा भिष्म पितामह र गुरु द्रोण जस्तै’ किन विवस छन् पूर्वअध्यक्षहरु ? एनआरएनएको अस्तित्व माथी प्रश्न खडा हुँदा अभियन्ताहरुलाई किन पोल्दैन ?
उत्तरः यी कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला । क–कसले राजनीति र पैसाबाट एनआरएनए खुला रुपमा बलत्कार गर्यो ? यस्को उतत्त खोजौ । गर्ने मान्छे खोजौ । पूर्व अध्यक्षहरुलाई हामी संग जोड्ने ब्यवस्था मिलाउनुसे यति गर्नलाई बिधानलाई संशोधन गर्न पर्दैन ।
यी सबै प्रश्नहरुको एउटै उत्तरको खोजीमा हामीले आमुल परिवर्तनको एजेण्डा अगाडी सारेका छौं ।
सदस्यता देखी निर्वाचन पद्दती सम्म) । आउने चुनौतीमा खुला छलफल गरौं, तर परिवर्तनका लागि खुट्टा नकमाउँ साथीहरु । हामीले नगरे कसले गर्छ? अहिले नगरे कहिले हुन्छ परिवर्तन ? मेरो धारणाः निशुल्क सदस्यतालाई संजीबनि बुटी जसरी प्रस्तुत गरिदैँछ । जुन सरासर गलत छ । मैले कुरा गरेका अधिकाश साथीहरूले यस्को बिरोध गर्नु भएको अवस्था छ । परिवर्तन गर्नु पर्छ तर केका लागि ? सदस्यता शुल्कले हाम्रो परिवर्तनमा कहा बाधा पुर्यायो ? राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई अझ बढी स्वायत, अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाऊने हो । निःशुल्क सदस्यता हुने ,सदस्यहरूको सम्पुर्ण विबरण केन्द्रले राख्ने, चुनाब अनलाइन भोटिङग बाट हुने हो भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको काम ताली बझाऊने मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।’